वर्षायाम सुरु भएसँगै कीटजन्य रोगको प्रकोप, यसरी बच्नुहोस !
काठमाडौँ - वर्षायाम सुरु भएसँगै विभिन्न किसिमका रोगको प्रकोप बढ्छ। विशेष गरी खाना, पानीको कारण हुने आउँ, झाडापखाला जस्ता रोगसँगै कीटजन्य रोगहरु बढी देखा पर्ने गर्छन्। यस्ता रोगको प्रकोप बढ्नुका धेरै कारण छन्।
१२. फोहोर पानीमा पौडी नखेल्ने। -स्वास्थ्य खबरबाट